မက်ဆာချူးဆက် WIC | JPMA, Inc
WICShopper ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလတွင်မက်ဆာချူးဆက် WIC အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်သူများအားထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ပထမ ၆ ပတ်အတွင်းတွင်အက်ပလီကေးရှင်းကိုရရှိနိုင်ကာမိသားစု ၁၅၀၀၀ ကျော်သည် WICShopper ကိုဈေးဝယ်ခရီးစဉ် ၈၀,၀၀၀ ကျော်တွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါမက်ဆာချူးဆက် WIC အစီအစဉ်ကိုလည်းအသုံးပြုသည် WICSmartJPMA မှမိုဘိုင်းကိရိယာအခြေပြု Nutrition ပညာရေးပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ ကိုနှိပ်ပါ ဒီမှာ JPMA နှင့်မက်ဆာချူးဆက် WIC အကြားမိတ်ဖက်အကြောင်းပိုမိုဖတ်ရှုရန်။
Mass WIC ကိုမေးပါ!
“ Mass Mass WIC” အမေးဘလော့ဂ်သည် Mass WIC အစီအစဉ်ရှိ moms များအတွက်အကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံဥာဏ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာမှုမှသည်ချက်ပြုတ်နည်းများအထိ Ask Mass WIC တွင်လူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိသည်။
တည်နေရာကိုရှာပါနှင့်သင့်ဧရိယာ၌ WIC ရုံးများများအတွက်သတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်ပါ။
Mass WIC ရုံးများအတွက်သင်တန်းသားများကိုရရှိနိုင်ကြောင်း WICShopper လက်ကမ်းကြော်ငြာကြည့်ရန်သို့မဟုတ် download လုပ်ပါ။
ဒီ app ကိုအောင်ဘို့ Thank you!
ငါကလေးယောက်အတွက်အမေတစ်ယောက်ပါ၊ ပြီးတော့ငါ၌ရှိခဲ့သည့်စကားကိုစက္ကူကိုဆက်မဆုံးရှုံးတော့ပါ။ ဒီအက်ပ်ကကောင်းပါတယ် ငါနှလုံးသားထဲမှကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့သည်မက်ဆာချူးဆက်မှဖြစ်ပြီး ၉ နှစ်အရွယ်သမီးသည်မည်သည့်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရနိုင်၊ မရနိုင်သည်ကိုသိရန်စစ်ဆေးခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
MA WIC ပါဝင်သူ
သင့်မိသားစုအတွက်ချက်ပြုတ်ရန်အရသာရှိစေရန် WICShopper ကိုပျော်ရွှင်စရာချက်ပြုတ်နည်းများများစွာပေးထားပါသည်။ အရသာအသစ်များကိုစူးစမ်းလေ့လာရင်းပျော်ရွှင်ပါ။ ဒီချက်ပြုတ်နည်းများကိုစမ်းကြည့်ပါ ဦး: သူတို့ကအလုပ်များတဲ့မိခင်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အထူးဒီဇိုင်းဆွဲထားတာ။